Taliban ayaa diyaar u ah inay dib u bilowdo howlaha garoonka diyaaradaha ee Kabul 'maalmo yar gudahood'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Taliban ayaa diyaar u ah inay dib u bilowdo howlihii gegida diyaaradaha ee Kabul 'maalmo yar gudahood'
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Taliban ayaa diyaar u ah inay dib u bilowdo howlihii gegida diyaaradaha ee Kabul 'maalmo yar gudahood'
n) Taliban oo diyaar u ah inay dib u bilowdo hawlihii gegida dayuuradaha ee Kabul 'dhawr maalmood gudahood'
Mareykanka ayaa 30kii Ogosto dhammeeyey daadgureynta dadka rayidka ah ee Kabul iyo dhammaan howlgalkooda Afghanistan.
Daalibaan ayaa dib u bilaabi doonta howlihii garoonka caalamiga ah ee Khamid Karzai.
Gegida dayuuradaha ee Kabul ayaa shaqeyn doona maalmo gudahood.
Taliban ayaa qabsatay Kabul iyo Afgaanistaan ​​oo dhan 15kii Ogosto.
Wakiilka Daalibaan ayaa maanta ku dhawaaqay in Madaarka Caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai uu si caadi ah dib u bilaabi doono maalmo yar gudahood.
“Waxaan diyaar u nahay inaan dib u bilowno howlihii garoonka. Waxaan ku samayn doonnaa maalmo gudahood, ”Anas Haqqani, oo xubin sare ka ah Daalibaan ayaa wareysi ku sheegay.
Haqqani wuxuu ku tilmaamay ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Afgaanistaan ​​dhacdo "weyn" wuxuuna ku tilmaamay maalintii daadgureynta ay dhammaatay maalin "taariikhi ah".
Maraykanku wuxuu dhammeeyey daad -gureynta dadka rayidka ah ee Kabul iyo dhammaan hawlgalkooda Afgaanistaan ​​30 -kii Ogosto. Abriil 2001, 14.
Ka dib markii lagu dhawaaqay go'aankan, Daalibaan waxay bilaabeen guluf ka dhan ah ciidamada dowladda Afghanistan. Bishii Ogosto 15 -keedii, dagaalyahannada Daalibaan ayaa gudaha u galay Kabul iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah, waxayna si buuxda gacanta ugu dhigeen caasimadda Afghanistan saacado yar gudahood.
Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai, oo sidoo kale loo yaqaan HKIA, ayaa 3.1 mayl (5 km) u jirta bartamaha magaalada Kabul ee Afghanistan. Waxay u adeegtaa mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee ugu weyn qaranka iyo mid ka mid ah saldhigyada milatari ee ugu weyn, oo awood u leh inay degto in ka badan boqol diyaaradood.
Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee Hamid Karzai ayaa hore loogu magacaabay Madaarka Caalamiga ah ee Kabul, deegaan ahaanna loogu magacaabay Madaarka Khwaja Rawash, in kasta oo ay weli si rasmi ah u yaqaanaan qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradu magaca dambe. Gegida dayuuradaha ayaa magaciisa hadda la siiyay 2014 si loogu maamuuso Madaxweynihii hore Hamid Karzai.